4 Zvinhu Zvinhu Vashambadziri Vanogona Kudzidza kubva kuZuva raAmai Dhata Kuvandudza Yemazuva Ezuva Emahara | Martech Zone
4 Zvinhu Zvinhu Vashambadziri Vanogona Kudzidza kubva kuZuva raAmai Dhata Kuvandudza Masaini aZuva raBaba
Chipiri, May 23, 2017 Chipiri, May 23, 2017 Terri Mock
Pasina nguva apo guruva rinogadzikana kubva kumamishinari aZuva raAmai apo vashambadziri vanoisa pfungwa yavo kuzuva raBaba. Asi usati waisa zviitiko zveZuva raBaba mudombo, vashambadzi vanogona kudzidza chero chinhu kubva kwavari Zuva raAmai rekuedza iro rinogona kuvabatsira kusimudzira kutengesa munaJune?
Mushure mekunyatsoongorora kweZuva raamai ra2017 rekushambadzira uye data rekutengesa, isu tinotenda mhinduro ndihungu.
Mumwedzi unotungamira kune Zuva raAmai, timu yedu yakaunganidza data kubva kune vanopfuura 2,400 vatengesi vepamhepo zvinoenderana nekusiiwa kwengoro, kudzoreredza email, kutendeuka, uye kutengesa. E-tailer yatakadzidza aive mumaindasitiri mashanu - Zvipfeko, Shangu & Pachedu; Zvitoro zveDhipatimendi; Kudya & Kunwa; Zvekuvaraidza Zvigadzirwa & Services; uye Specialty Retailers.
Yedu infographic pazasi inopa yakazara kuongorora kweiyo data, uye heano mashoma akakosha mapoinzi ayo vatengesi vanofanirwa kuchengeta mundangariro sezvavanomhanyisa yavo 2017 Yababa Campaign.
Kutengesa kweZuva raAmai Hakuna Kukwira Kusvikira Pedyo Nezororo
Ipo tichitenga zororo rakakura raZvita rinowana kusimba kukuru muna Gumiguru naNovember, zvakafanana hazvigone kutaurwa nezveZuva raAmai. Peak yekutengesa yaive paMay 8th, vhiki imwe Zuva raamai risati rasvika. Sezvineiwo, zuva rakakurumbira kune vatengi rekutenga pafoni yaive musi waMay 13th, iyo yaive ichicheka chaizvo!
Kune vashambadzi vanoronga zvinoitwa neZuva raBaba vavo, iro rakanyanya kutora Zuva raAmai kutora moyo murefu. Izvo zvakakosha kuti utange Kushambadzira kwezuva raBaba nekukurumidza kwete kupfuura gare gare. Asi usatya kana kutengesa kusingatore kusvikira zuva reChirangaridzo.
Email Remarketing yaive Yakanyanya Kubudirira Vhiki Pasati Zuva raamai
Zvisingashamisi, zuva rekutengesa repamusoro raive zvakare zuva iro email-yekushambadzira zvakare yakavhurwa mitengo yaive yepamusoro.
KweZuva raBaba, ita shuwa kuti urikuronga "yekupedzisira mukana" yemaimeri mushandirapamwe wevhiki pamberi paJune 18. Vatengesi vakaonga zvakajeka zviyeuchidzo zveZuva raAmai, uye pamwe ndizvo zveZuva raBaba futi.
Kusiyiwa Mitengo Yakakwenenzverwa Mumazuva Anotungamira Kusvikira Muzuva raAmai
Desktop uye nharembozha yekutengesa inogona kunge yanga iri pakakwirira kwazvo muvhiki rinotungamira kune Zuva raAmai, asi ndozvakaitawo mwero wekusiiwa kwengoro. Gore rino, Chivabvu 11 rakaona yakanyanya kusiyiwa mwero wemazuva ese mumwedzi unoendesa kuzororo - inoshamisa 89%.
Nezuva raBaba, edza kupokana neaya akakwirira ekusiya mwero muvhiki rinotungamira kuzororo nekupa zvimwe zvekuwedzera zvinokurudzira. Kana iwe uchikwanisa kutenga yemahara, yakavimbiswa dhirivhari, inogona kubatsira kudzikisira vanonetsekana miniti-yekupedzisira nezvekuti zvipo zvavo hazvizosvika nenguva.
Chipiri aive Akashata Mazuva Ekutenga, uye Mugovera Akanyanya
Vatengi veZuva raAmai vaishandisa zvakajeka mazuva evhiki kubhurawuza, uye kupera kwevhiki pakutenga. Kana iwe uchida kuwedzera kutengesa mukati mevhiki pakati pevhiki kusvika kunaJune 18, funga kumhanyisa madhiri ezuva revhiki. Semuenzaniso, kukwidziridzwa kwemaawa makumi maviri nemana nemusi weChipiri kunotungamira kune Zuva raBaba iro rinopa mutero pazvinhu zvese zvakatengwa, kana chipo chemahara, zvinogona kuenda kure kure mukuwedzera Chipiri kutengesa.
Sezvo vanhu vatove kuda kutenga pakupera kwesvondo, vashambadziri vanogona kumhanyisa mishandirapamwe pakupera kwevhiki izvo zvinongoyeuchidza vanhu kuti vatenge yezuva raBaba vavo, uye kwete kupa zvinokurudzira zvekuzviita.
Tags: 2017e-zvokutengeseranaecommerceecommerce maitirozuva raamai
Terri Mock ndiye Chief Reveue Officer we Ve Inopindirana, mupi wekushambadzira kwedhijitari uye ekushambadzira masevhisi kumakambani anodarika zviuru gumi e-commerce pasi rese. Kunyomba kune makore anopfuura makumi maviri ezviitiko semutungamiri mukuru, achitarisa kutyaira kukura kwemari, kugadzira mazano ekuenda kumusika uye kuwedzera mashandiro ebhizinesi kumakambani eetekinoroji.
Dell EMC Nyika: 10 Mitemo Inoshandura Ruzivo Technology
May 29, 2017 pa 10: 57 PM
Wow. Kutenda nekugovana izvi zvimiro Terri! Inobatsira kwazvo. Ini ndanga ndichinetseka, inguva ipi yezuva inonyanya kushanda pakutumira tsamba dzetsamba dzeemail?